मनमा डर त्रास हुन्छ, तर स्वास्थ्यकर्मी भईसकेपछि डराएर विरामीको उपचार गर्दैन्,भन्न मिलेन् : डा. शर्मा « Online Rapti
मनमा डर त्रास हुन्छ, तर स्वास्थ्यकर्मी भईसकेपछि डराएर विरामीको उपचार गर्दैन्,भन्न मिलेन् : डा. शर्मा
अनलाइन राप्ती | 10:06 AM
दाङको तुलसीपुर १७ बेलझुण्डी दाङमा प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमण भएका विरामीहरुको उपचारको लागी एक सय बेडको कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गरेको छ ।
दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पिसीआर विधीबाट स्वाब संलकन गर्ने र रिर्पाेट पोजेटिभ आए ति विरामीहरुलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले उक्त अस्पातलमा दाङका २ जना, बाँकेका ८ जना र कपिलबस्तुका ६ जना गरी अस्पतालमा उपचार हुदैछ ।
कोरोनाका कारण विश्वमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरुले विरामीको उपचार गर्दा गर्दै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् । साथै नेपालका केही स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कोरोना विशेष अस्पातलमा जिल्ला बाहिरबाट विरामीहरु ल्याउँदा समय विरोध भएको थियो । आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर दिनराती नभिन नागरिकको सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरुलाई विभिन्न समयमा आत्मागलानी हुने कार्य भैरहेको खण्डमा कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीका प्रमुख डा. सर्बेश शर्मासंग विकास डाँगीले संक्षिप्तमा गरिएका कुराकानी……….
अस्पतालको संरचना कस्तो छ । उपकरणहरु प्राप्त छन् त ?
केन्द्रिय आयुर्वेद विद्यापीठको ( केन्द्र आयुर्वेद मेडिकल क्याम्पस)को भवनमा एक सय बेडको आईसोलेसन अस्पताल स्थापना स्थापना भएको हो । कोरोना विशेष अस्पताल भएकाले ७ वटा आईसियु, ३ वटा भेन्टीलेटर सहित एक सय बेडको हो । एक सय बेडको भएता पनि विरामीको चाप अनुसार ३० बडे, ६० बेड र एक सय बेडमा जाने अवधारणा रहेको छ । ३० बेड भरिए भएपछि ६० बेडमा जाने त्यो पनि भरिए एक सय बेडमा जाने हो । अहिले ३० बेडको संरचनालाई पुग्ने गरी स्टापहरु अस्पतालमा छन् । त्यसैगरी अस्पतालमा उपचारको क्रममा कुनैको मृत्यु भएमा सब ब्यवस्थापन गर्नेको लागी एक वटा सब वहानको ब्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
अस्पतालमा अहिले कति जना विरामीहरु छन् । उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
दाङको बेलझुण्डीमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिले दाङ गढवाका २ जना,बाँकेका ८ जना र कपिलबस्तुका ६ जना गरी १६ जना विरामीहरु छन् । उनीहरुको अवस्था अहिले सम्म सामान्य नै छ । कुनैलाई कुनै लक्षण देखिएको छैन् । दाङका २ जना, बाँकेका ८ जना र कपिलबस्तुका ३ जनालाई शुक्रवार राती ल्याएको हो,भने फेरी कपिलबस्तुका ३ जनालाई शनिवार दिउँसो ल्याएको हो ।
संक्रमित विरामीहरुको उपचार कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीहरुको अवस्था स्वस्थ छ । उनीहरुको २÷२ घण्टाको फरकमा चेकजाँच हुन्छ । उनीहरुलाई कोरोना लक्षण अहिले सम्म देखिएको छैन्, यदि कसैलाई ज्वरो आएमा, पखाला लागेमा त्यहि अनुसारको उपचार हुन्छ । उनीहरुको हरेका ४ दिनमा स्वाब संकलन गरी चेकजाँच गर्ने गर्दछौँ । त्यो रिर्पाेट नेगेटिभ आए फेरी एक दिन राखेर फेरी स्वाब चेक गर्ने र रिर्पाेट नेगेटिभ आए डिस्चार्ज गर्नेछौँ । साथै कुनै पनि लक्षण नदेखिएका विरामीहरुलाई तनावमुक्त र शारीरिक ब्यायामको लागी योगा कलास दिन लागिएको छ । साथै उनीहरुलाई आयुर्वेदिक औषधीहरु समेत दिने गरेका छौँ ।
अस्पतालमा कति जना स्टापहरु छन् ?
अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर डाक्टर, २ जना विशेषज्ञ डाक्टर, १० जना स्टाप नर्स र प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा अस्पतालमा सेवा गर्ने ४०/४५ जनाको टिम छ ।
अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री कस्तो ?
अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षित राख्नको लागी नेपाल सरकारले दिएको एन ९५ मास्क, करिब ढेड सयवटा पिपीई अहिले अस्पातलमा छन । यदि त्यस्ले पनि पुगेन भनी सरकारसंग माग्ने निर्णय भएको छ । अहिले सम्म प्राप्त नै छ । तर एक सय बेड भरिएमा थप माग्नु पर्ने हुन्छ । तर तत्काललाई स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागी सुरक्षा सामाग्री छ ।
अस्पातलमा बाहिरबाट विरामी ल्याउँदा विवाद भएको थियो नि ?
प्रदेश सरकारले यस अस्पताललाई ‘क’ क्याटेगरीमा बनाएको छ । नेपालगञ्ज र बुटवलमा विरामीहरु भरिएका कारण त्यहाँका विरामीहरु यहाँ उपचारको लागी आएका हुन् । उपचार सबैले पाउँनु पर्छ, बाहिरबाट विरामीहरु ल्याउँदैमा कोरोना सर्ने र नल्याउँदैमा नसर्ने भन्ने हुदैन् । संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ , उपचार पाउँने सबैको अधिकार हो । बाहिरबाट विरामी ल्याउँदा सुरक्षित ढंगबाट ल्याईन्छ, फेरी हावाबाट संक्रमण हुदैन्, अस्पतालमा विरामी आएक स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अरु कोही जान पाउँदैन् । हामीले बादविबाद गर्नु भन्दा पनि सबै मिलेर कोडिभ विरुद्धको लड्न जरुरी छ ।
तपाईहरु स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणका विरामी उपचार गर्दा मनमा कस्तो लाग्छ ?
मनमा डर त्रास हुन्छ, तर स्वास्थ्यकर्मी भईसकेपछि ढराएर विरामीको उपचार गर्दैन्,भन्न मिलेन् । हाम्रो सुरक्षाको लागी सरकारले दिएको सामाग्रीहरु लगाएर गरिरहेका छौँ । अस्पतालबाट नै सर्न सक्छ भन्ने पनि छैन्, तर आफ्नो सुरक्षा सामाग्रीहरु लगाएर उपचार गर्दैछौँ ।
तपाईहरुलाई घरपरिवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ ?
घर परिवारबाट तपाईहरुको परिवारको जस्तै आउँछ । सकेसम्म सुरक्षित बस्न आग्रह गर्दछन् । पढेलेखेका भएता पनि उनीहरुलाई डरत्रास हुने गर्दछ । अन्य भन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई घर परिवार र बच्चाहरुलाई त्रास हुन्छ । बच्चाहरुले समेत सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछन् । तर आफुले सुरक्षित तरिकाले काम गर्नु पर्दछ ।
अस्पताल वरपरका स्थानियले कोरोना फैलिन्छ की भन्ने त्रासमा छन् त ?
अस्पतालबाट रोग फैलिदैन्, यदि अस्पतालबाट नै रोग फैलिए नेपालका सबै अस्पताल बन्द गरे हुन्छ । अस्पतालहरुमा विरामीको उपचार गर्ने ठाउँ हो । हामीले पनि ज्यान जोखिम राखेर विरामीहरुको उपचार गर्दै आएको छौँ । अस्पतालबाट संक्रमण फैलिन्छ भन्दै हिड्नु उचित होइन् । अहिले सबैले मिलेर कोरोना विरुद्धको लडाई जित्नु छ । त्यसैले अस्पताल वरपरका मात्र नभई दाङबासी पनि त्रसित हुनु पर्दैन् । बरु आम नागरिकहरुले लकडाउनको र सामाजिक दुरीको पालना गर्नु पर्दछ ।
कोरोनासंग भागेर हुदैन् , यस्लाई जित्नको लागी लड्नु नै पर्दछ । सामाजिक दुरी कायम गर्ने , साबुन पानीले हात धुने, धेरै भिडभाडमा नजाने, विहान विहान धेरै भिडभाड हुने भएकाले सामाजिक दुरी कायम गरेर मात्र काम गर्ने। सकेसम्म त घरबाहिर नआउने लकडाउनको पुर्ण रुपमा पालना गरे हामी यस लडाईलाई जित्न सक्छौँ । त्यसैले सम्पूर्ण दाङबासीलाई लकडाउन र सामाजिक दुरी पालना गर्न आग्रह गर्दछु ।